Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo maanta la wareegay Deegaanka Kurban | Dhacdo.com
Home Uncategorised Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo maanta la wareegay Deegaanka Kurban
Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo maanta la wareegay Deegaanka Kurban
Ciidanka Xooga Dalka & Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, ayaa waxay maanta dagaal muddo kooban soconaayay ay kula wareegen gacan ku haynta Deegaanka Kurban, oo qiyaastii 30km u jirta Degmada Diinsoor Ee Gobolka Baay.
Kurban waxay ka mid tahay dhulka ay Ururka Al Shabaab isku deyayan inay ka go’doomiyan Degmada Diinsoor, oo gacanta Dowladda Somaliya soo gashay daba yaaqadii bishii July, ka gadaal markii ay isaga baxeen Shabaabka.
Ciidamada Dowladda iyo Amisom, ayaa dhawr jiho kaga soo dhaqaaqay Shabaabkii ku sugnaa Deegaankaasi, waxayna ku khasbeen inay isaga baxaan, taa oo dhabaha u xaartay inay si buuxdo ula wareegan Ciidamada.
C/laahi Sheekh Maxamed oo ka mid ah Saraakiisha Ciidanka Xooga Dalka, ayaa sheegay inaanay iska caabin xoogan kala kulmin mintidiinta, ayna si fudud ugala wareegen gacan ku haynta Kurban.
Mar uu ka hadlaayay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi, ayuu sheegay inay ogyihiin dhimashada laba ka mid ah dagaal-yahanada Shabaab, waxaana Ilaahay mahadiis ah buu yiri inuusan jirin wax khasaaro ah oo dagaalka naga soo gaaray.
C/laahi Sheekh Maxamed oo siyaabooyin kala duwan ula hadlay Warbaahinta gudaha, ayaa sheegay in qorshahoodu uu yahay inay isku wada ballaariyan dhammaan dhulka hoos yimaada Diinsoor, ayna ku sugan yihiin Shabaabka.
Shabaabka, ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay iska lumiyay dhul ballaaran oo ay ka jooggeen Gobolada Koonfurta Somaliya, ka dib markii uu culeys ka soo fuulay dhinaca Ciidamada Huwanta.